Laacibka Pirlo oo ku biirey Juventus
Kooxda Juventus ayaa ku dhawaaqdey inay heshiis la saxiixatey xidiga khadka dhexe ee kooxda AC Milan isaga tagey Andrea Pirlo, iyadoo kula wareegtey heshiis furan isla markaana la saxiixatey heshiis jiraya ilaa 30-ka bisha June 2014.
“Andrea Pirlo hada waa ciyaartoy rasmi ah oo ka tirsan kooxda Juventus, kooxdana heshiis ayay la gaartey” sidaasi waxaa lagu yiri warsaxaafadeed lagu qorey bogga Internet-ka ee kooxda Juventus.
Manchester United oo heshiis kala gaartey Atletico Madrid goolhaye David Gea
Goolhayaha kooxda Atletico Madrid ee wadanka Spain ka dhisan David De Gea ayaa la xaqiijiyey in si rasmi ah xagaaga uu ugu biirayo kooxda Manchester United ka dib markii heshiis arinkaasi ku aadan ay wada gaaraan maamulka Atletico Madrid & Man United.
Ku dhawaaqitaanka in heshiis laga gaaray doonitaanka Man United 20 jirka David de Gea waxaa la filayaa in maalinta Isniinta uu ku dhawaaqayo macalinka kooxda Ma U Sir Alex Ferguson.
Warar aan si buuxda shaaca looga qaadin ayaa sheegaya in Manchester United ay heshiis kula wareegtey 23 milyan oo doolar ku kacaya goolhaye David oo mudooyinkan ku jiray raadaarka Sir Alex oo uu ka tagayo ciyaarahana ka fariisanayo goolhayaha halgamaha ah Van der Sar.
Diego Forlan oo looga gacan haatiniyo Imaaradka Carabta
Weerrayhanka qaranka Urugway & kooxda Atletico Madrid Diedo Forlan ayaa la sheegayaa in uu hanqaltaagayo in uu xaga lacagta u leexdoo uu dhanka wadamada Carabta gaar ahaan Imaaraadka Carabta uu aado.
Forlan ayaa la sheegayaa in uu u gacan haatinayo mucjisadii hore ee kubada cagta kana mid ahaa qaranka Argeniten ciyaarihii xagagii hore ka dhacayna Koonur Afrika hogaaminayey xulka qarankiisa Diego Maradona oo haatan tababare u ah kooxda Al Was lee ka dhisan wadanka Isu taga Imaaraadka Carabta.